विश्वास: मार्टिन विजल्याण्ड
मान्छे कसरी 'जागरूकता' को बारे मा कुरा गर्न सक्छ र एकै समयमा प्रणाली को बनाए राखन को मदद गर्दछ?
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	3 जुलाई 2019 मा	•4टिप्पणिहरु
तपाईं चेतनाको बारेमा कुरा गर्ने धेरै सुन्नुहुन्छ। कसैलाई गुरु खोज्छ; अरूले मनन गर्छन् वा अभ्यास गर्छन्; अरुले चर्च जान्छन् वा धर्म वा आध्यात्मिकताको केही रूपमा संलग्न हुन्छन्। ठूलो रहस्य छ कि कति व्यक्तिहरूले आफ्नो जहाज सफा गर्न र यस समयमा अझै पनि [...]
यदि भविष्यवाणीहरू पूरा भएमा, के तपाईंको धारणा सत्य हुन् कि त्यो प्रमाण हो?
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	17 जून 2019 मा	• 24 टिप्पणिहरु
धेरै पाठकहरूले भविष्यवाणीहरूको पूर्ति देखाउँछन् कि उनीहरूको विश्वास सही छ भन्ने संकेतको रूपमा। ती व्यक्तिहरूका लागि धर्ममा रुचि छैन, म भन्न चाहन्छु: फेरि सोच्नुहोस्, किनकी सारा विश्व राजनीति धार्मिक विश्वासहरूमा आधारित छ। यदि तपाइँ त्यो देख्नुभएन भने, तपाईले मात्र ध्यान दिनुभएन। किन [...]
Idiotic कोनेमा महत्वपूर्ण विचारकहरू राख्न को लागि फ्लैट-पृथ्वी सिद्धान्त बेकार छ
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	20 फेब्रुअरी 2019 मा	•0टिप्पणिहरु
हालैको हामी धेरै अधिक सन्देशहरू देख्नका लागि समाचारमा देखा पर्दछ जुन धेरै मानिसहरू विश्वास गर्छन् कि पृथ्वी सपाट छ। हामी यहाँ देख्छौं उही रणनीतिहरूले यूएफओ को विश्वास मा प्रयोग गरे वा आर्नोल्ड कार्स्किसमा लागू गर्ने रणनीतिहरु जुन एनओएसको लागी जस्तो देखिन्छ [...]
होइन, हामी एक 'एक्टरटररियल' कम्प्यूटर सिमुलेशनमा बाँच्न सक्दैनौं: त्यो बेकारबाट छुटकारा पाउनुहोस्
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	12 फेब्रुअरी 2019 मा	• 15 टिप्पणिहरु
यो हप्ता म एक पाठक को दिशा मा फेरि Niburu.co मा एक लेख मा आए। यो दु: खी छ कि वैकल्पिक मिडियाले सबै चीजहरू जो कि extraterrestrials संग गम्भीर ध्यान आवश्यक छ जोड्न स्थापित भएको जस्तो देखिन्छ जस्तो देखिन्छ। 'Extraterrestrials' विषय स्पष्ट रूपमा बेचन हुन्छ, किनभने धेरै अझै पनि [...]
ब्रह्मांड एक अनुकार हो: सबै धर्म, हरेक विश्वास प्रणाली धोखा छ
मा दायर सिमुलेशन, मन र सोल नियन्त्रण, समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	30 जुलाई 2018 मा	• 22 टिप्पणिहरु
के तपाईलाई थाहा छ कि तपाईंले हेर्नु भएको सबै चीजले मात्र भौतिकता दिन्छ? यसले लगभग एक शताब्दी पुरानो प्रयोग डबल डबल (डबल खुल्ला) प्रयोग भनिन्छ। विश्वव्यापी क्वांटम फिजिस्टिस्टहरूले यस प्रयोग सैकड़ों पटक प्रयोग गरेका छन्, किनभने यो धेरै कष्टको कारण र त्यस्ता महान आश्चर्यलाग्दो समयमा। यो एक खोज छ कि [...]
येशू आफैंलाई उद्धार गर्ने सबैलाई उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ! या इस्लाम एक मात्र सही तरीका हो?
मा दायर मन र सोल नियन्त्रण, समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	26 जुलाई 2018 मा	• 48 टिप्पणिहरु
आज म स्नायु प्रणाली विकास छैन किनभने गर्न 80 साथै अर्द्धशतकको मा सम्म शरिरका कुनै भाग बेहोस बनाउन दिइने औषधि बिना मा संचालित थिए traumatizing जवान बच्चाहरु र बच्चाहरु बारेमा एउटा लेख पठाइएको थियो। म सिफारिस गर्दछु कि तपाई यहाँ जारी राख्नु अघि यो लेख पढ्नुहोस्। वास्तवमा, यो शंकाको बारेमा हो। पहिलो आघात [...]
अनुसन्धानले देखाएको छ कि एनओएस र पुलिसले गलत प्रमाण दिन सक्छ र कसरी अलबाइलाई गलत घोषित गर्न सकिन्छ
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	7 मार्च 2018 मा	• 32 टिप्पणिहरु
यस साइट को शोध देखि, हार्ड सबूत प्रकट भएको छ कि एनओएस र पुलिस एक अन्य प्रमाण को एक-दूसरे मा बदल सकते हो। यो दुवै छवि र ध्वनि प्रमाण र डीएनए प्रमाणहरूमा लागू हुन्छ। राम्रो तरिकाले स्थापित प्रमाणहरू विश्लेषण गर्न यस लेखलाई राम्ररी पढ्नुहोस्। वास्तवमा के संभावनाहरु को एक संकेत [...]
कुल भ्रमण: 4.107.048
कोरोनाभाइरस कोविड - १:: जसको बारेमा हामीले मौरिस डि होन्ड र विलेम एन्जल सुन्न पाउँदैनौं।
'कोरोनाभाइरस कोविड -१ entitled' शीर्षक भएको नयाँ पुस्तक मार्टिन भ्रिजल्याण्डको अन्त कहाँ हुन्छ? अब उपलब्ध छ
एशेर पेनरोस सीढीहरू विपक्षी एफभिएडी, विलेम एन्गल र मौरिस डि होण्ड
आइतवार जून २ 28 प्रदर्शनले भाइरस पागलपनको प्रेम, धैर्य र ट्रस्ट सुरक्षा नेटलाई माल्विल्डले बुझाए
कालो लाइभ पदार्थ, LGBTI र अनिवार्य कोभिड - १ vacc भ्याक्सिनहरू के समान छन्?
लिडिया रुस्जे op कोरोनाभाइरस कोविड - १:: जसको बारेमा हामीले मौरिस डि होन्ड र विलेम एन्जल सुन्न पाउँदैनौं।
मार्टिन भिजल्याण्ड op 'कोरोनाभाइरस कोविड -१ entitled' शीर्षक भएको नयाँ पुस्तक मार्टिन भ्रिजल्याण्डको अन्त कहाँ हुन्छ? अब उपलब्ध छ
Harald Pfeiffer op 'कोरोनाभाइरस कोविड -१ entitled' शीर्षक भएको नयाँ पुस्तक मार्टिन भ्रिजल्याण्डको अन्त कहाँ हुन्छ? अब उपलब्ध छ
Marianne op 'कोरोनाभाइरस कोविड -१ entitled' शीर्षक भएको नयाँ पुस्तक मार्टिन भ्रिजल्याण्डको अन्त कहाँ हुन्छ? अब उपलब्ध छ
ClairVoyance op आइतवार जून २ 28 प्रदर्शनले भाइरस पागलपनको प्रेम, धैर्य र ट्रस्ट सुरक्षा नेटलाई माल्विल्डले बुझाए